Isitolo Esinamathela Kakhulu Esiku-inthanethi
Elinye lamakhasimende ami lingena emgwaqeni lenze izethulo zokuthengisa futhi langicela isincomo ngalo izinduku ze-laptop nge-laptop yakhe futhi njengemuva lokushiya amakhasimende akhe namakhasimende akhe. Ngizothembeka ukuthi ngi-odile izitikha ku-inthanethi futhi izitika ezisezingeni eliphakeme kuphela engake ngazithola ngentengo enhle futhi kwaba noguquko olukhulu Isigaxa Mule.
Ukhiye engikukhethayo isitikha esivela kalula ngaphandle kokushwabana futhi sibe yisiphithiphithi esikhulu. Ngihlala ngithenga amadivayisi amasha neziqukathi, futhi ngivame ukunikeza noma ukuthengisa ezindala zami. Uma unesitika eshibhile, cishe ngeke kususwe ngaphandle kwamakhemikhali afanele. I-Sticker Mule ihlale ithumela izitika okuthi, ngisho nangemva kweminyaka, zixebule ngocezu olulodwa oluhle. Ngikholwa ukuthi yinhlanganisela yekhwalithi yesitika sabo nokunamathela kwabo okubenza babe bahle kakhulu.
Isitika Somuthi: Izitika Zokwezifiso
Isigaxa Mule izitika zine-laminate ekhethekile evikela ekuchayweni umoya, imvula, nokukhanya kwelanga. Ungawabeka ngisho nakumshini wokuwasha izitsha bese uphuma ubukeka umusha sha.
Isigaxa Mule kuyindlela esheshayo futhi elula yokuthenga imikhiqizo ephrintiwe yangokwezifiso. Oda ngemizuzwana engu-60 futhi sizoguqula ukwakheka kwakho nemifanekiso ibe izitikha zesiko, odonsa, izinkinobho, amalebula, nokupakisha ngezinsuku. Banikela ngobufakazi bamahhala be-inthanethi, ukuhanjiswa kwamahhala emhlabeni wonke, kanye noshintsho olushesha kakhulu.
Isigaxa Mule inikeza izitika ze-vinyl, izitika zokufa, izitika zombuthano, izitika zikanxande, izitika zesikwele, izitika ze-oval, izitika ze-bumper, amashidi wokunamathela, izitika zokunamathisela ukusika, izitikha zokudlulisa, izitika zamakhonsi ayindilinga, izitika ezicacile, itheyiphu yangokwezifiso, iziphawuli zelebula, odonsa , izinkinobho, kanye netape yokupakisha.
Oda izitika zakho ngemizuzwana bese uthola ubufakazi be-inthanethi bamahhala, ukuhanjiswa kwamahhala emhlabeni wonke, kanye noshintsho olushesha kakhulu.
Thenga Izitika Manje
Tags: izitika ezinhle kakhulu ku-inthanethiokunamathelayo okuningiizinkinobhoizinduku zombuthanoizitika ezisobalaitheyiphu yangokwezifisokufa usike izitikaizitika zokufaizitikha zokusikaabahlinzeki belebulaizikhumba ze-laptopodonsaizitika ezi-ovalIzitika zesikweleizitika zekona eziyindilingaizikhumba ze-smartphoneizinduku zesikweleizitikha zokusika zokunamathiselaumnyuzi wesitikaamashidi wokunamathiselastickersdlulisa izitikaIzitika ze-vinyl